Puntland oo diiwaan gelineysa dhaqaatiirta – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Puntland oo diiwaan gelineysa dhaqaatiirta
A warsame 26 April 2014 4 April 2019
Garowe – Mareeg.com: Maamulka Puntland ayaa diiwaan gelinaya dhaqaatiirta howlgala magaalooyinka hoos yimaadda, iyadoo arrintaas lagu shaaciyey amar maanta oo ah 26 April 2014 kasoo baxay xafiiska wasiirka caafimaadka Puntland, Dr. Saadiq Eenow.
Wasiirka Caafimaadka maamulka Puntland Dr. Saadiq Eenow ayaa sheegay mudo 20-cisho ah inay haystaan dhakhaatiirta ka shaqaysta magaalooyinka Puntland ayna iska soo diiwaan galiyaan xarumaha ururka dhaqaatiirta ay gobalada ku lee yihiin.
“Waxaa lala socod siinayaa dhammaan dhakhaatiirta ka howlgala gudaha Puntland in ay iska soo diiwaan galiyaan xafiisyadd ururka dhakhaatiirta ee gobaladda Puntland, muddo dhan 20-cisho” ayaa lagu yiri warka kazoo baxay wasaaradda caafimaadka maamulka Puntland.
Waxaa sidoo kale warka lagu yiri “Ururka Dhakhaatiirta waxay usoo gudbin doonaan wasaradda Caafimaadka xarunteeda dhexe si loo siiyo oganlaansho u khatar kasta ku shaqaynsan kato,ka dib arka la hubiyo aqoonta iyo khibada dhakhtarnimo”.
Dr. Enow ayaa sheegay iney ka go’antahay sidii ay wax uga qaban lahaayeen dhakhaatiirta sida beenta ah uga dhex shaqaysanaya gobalada Puntland, iyadoo dhawaan Puntland laga musaafariyay nin Keenyaan ah oo dhakhtarnimo in mudo ah ku shaqaysanayay.
Prof. Jawaari oo amray in la baaro sababta mushaar loo siin waayey shaqaalaha dowladda